Mudanayaasha baarlamaanka oo xilkii ka qaaday M/weynaha Galmudug. – Radio Daljir
Galkacyo, Dec 01 – Mudanayaasha baarlamaanka Galmudug ayaa fadhi ay maanta yeesheen cod aqlabiyad ah xilkii uga qaaday M/weynihii maamulkaas Maxamed Axmed Caalin.
Afhayeenka baarlamaanka Galmudug Xasan Maxamuud Hayl oo u warramay barnaamijka Caawa & Daljir ayaa xaqiijiyey xil ka qaadista lagu sameeyey M/weyne Caalin.
Md. Hayl waxaa uu sheegay in Md. Caalin loo gudbiyey qoraal dalbaya in uu hor yimaado baarlamaanka, uuna dhegaysto dhaliisha iyo eedda mudanayaasha baarlamaanka oo ay ka mid ahaayeen xil gudasho la’aan, ku takri fal xil, lunsi dhaqaale, iyo dawladiisa oo aan waxba ka qaban xilkii lagu aaminay.
Caalin ayaa la sheegay in uu ku gacan-sayray dalabka mudanayaasha baarlamaanka.
17 ka mid ah golaha wakiilada ayaa goobjoog ka ahaa fadhiga xilka looga qaaday Md. Caalin, kulligoodna u codeeyey xil ka qaadistiisa; baarlamaanka Galmudug ayaa ka kooban 25 xubnood.
Caalin, oo xilka hayey ku dhawaad 2 sano, ayaan wax ka weydiinay xil ka qaadista lagu sameeyey, balse ka qaabsaday in uu tafaasiil ka bixiyo.
Sida auu sheegay Md. Hayl xilka waxaa si ku meel gaar ah ula wareegay M/weyne ku xigeenka oo xilka sii hayn doona inta M/weyne laga dooran doono.
Maamulka Galmudug ayaa ka dhisan xaafada Wadajir ee koonfurta magaalada Galkacyo.